Sababta Keydka loo dhigay Pogba kulanka adag ee Liverpool oo Sharaxaad laga bixiyay – Gool FM
Byare December 16, 2018
(England) 16 Dis 2018. Jose Mourinho ayaa markale keydka u dhaa dhiciyay Paul Pogba kulanka adag ay iminka Anfield kula yeelanayaan Liverpool.
Xiddiga reer France ayaa horey keydka loogu cabay kulamadii la soo dhaafay ee Premier League ee Arsenal iyo Fulham, laakiin waxaa la safay kulankii Valencia ee Champions League isagoona la yimid bandhig aan sidaa u sii qurux badneyn.
Jose ayaa sheegay inuu u baahan yahay qad dhexe oo xoogan oo cadaadis saara weerarka halista ah ee Liverpool sidaa darteed uu keydka u dhigay Pogba.
“Waxaan sameeyaa go’aamo badan oo ku aadan 11-ka aan kulanka u soo xulanayo iyo kuwa aan keydka uga soo tagayo” Jose ayaa sidaa yiri.
“Waxaan had iyo jeer isku dayaa inaan doorto waxa aan aaminsanahay inay kooxda u fiican tahay. Waxaan aaminsanahay in Herrera, Matic iyo Lingard ay lumiyeen xoogaa tayo ah.
“Laakiin sidaas ay tahay kooxda waxay noqotay mid xoogan oo sahlan marka ay kubbada ka maqan tahay, taasina waa waxa aan aaminsanahay inaan u baahanahay inaan kula ciyaarno koox sidan u dheereysa sida Liverpool.”.
Liverpool oo dib ugu soo laabatay hogaanka isla markaana guushii ugu horreysay ka gaartay Man United tan iyo.....+SAWIRRO